Xuutiyeen Yeman oo sheegay iney gacanta ku dhigeen Guutooyin katirsan ciidanka Sucuudiga – Bandhiga
Xuutiyeen Yeman oo sheegay iney gacanta ku dhigeen Guutooyin katirsan ciidanka Sucuudiga
Afhayeen u hadlay kooxda Mucaaradka ah Ee Xuutiyiinta Yeman ayaa sheegay in Dagaal ay la galeen Ciidamada Sacuudiga ay Gacanta uga dhigeen ilaa iyo Boqolaal Askarta Sacuudiga.
Dagaalka ayaa waxa ay sheegeen in ay kula galeen Gobolka Najran oo u dhow xadka Yemen iyo Sacuudiga,warka xuutiyiinta ayaa intaas ku daraya in ay sidoo kale ay Qabsadeen Boqolaal Baabuurta Dagaalka iyo Rag Nool-Nool, Wuxuuna Dagaalka uu ku qaatay sida ay sheegteen 72-saac.
TV ku hadla Afka xuutiyiinta ayaa baahiyay Muuqaalo ay cadayn uga dhigayaan sheegashadooda iyo waliba Muuqaalka Afhayeenka Xuutiyiinta oo si toos ah u Aqrinayay War-Saxaafadeedka ka soo baxay Kooxda Xuutiyiinta Ee Dagaalka kula jirta Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Bayaanka Xuutiyiinta ayaa intaas ku daraya in Dagaalka Xuutiyiinta ay garab ku siinayeen Kooxda drone-ka, kuwa Madaafiicda goobta, iyo Hubka Gantaalada Difaaca Cirka Ee Ciidamada Xuutiyiinta, iyagoo dhinaca ka soo horjeedana ku Eedeeyay in ay isticmaalayeen Diyaaradaha Dagaalka Ee Sacuudiga.
Xuutiyiinta Yemen ayaa Wacad ku marey in aysan joojin doonin Dagaalka ay kula jiraan Boqortooyada Sacuudi Carabiya tan iyo intii ay ka gaarayaan hadafkooda ay Dagaalka ku galeen, taasi oo ay sabab uga dhigeen Gardarada qaawan oo ay Sacuudiga ku soo qaadeen Gayiga Yeman sida ay hadalka u dhigeen Xuutiyiinta Yemen.
Isku soo wada duuboo Majirto cid ka madaxbanaan oo cadeynaysa sheegashada Xuutiyiinta ay sheeganayaan Guulaha Militari oo ay ka gaaren Dagaalkii Saacadihii ugu danbeeyay ay la galeen Militariga Boqortooyada Sacuudiga.